Typekit waxaa hadda loo yaqaan Adobe Fonts wuxuuna toos ugu socdaa Adobe CC | Abuurista khadka tooska ah
Typekit waa adeeg font oo ay heshay 2011 shirkadda Adobe. Hadda waa markii uu ku dhawaaqay in Typekit hadda loo yaqaan Adobe Fonts iyo inuu yeelan doono in ka badan 14.000 nooc oo iskiis isugu dhigaya inuu yahay il muhiim u ah dhammaan noocyada xirfadleyda.
Sidoo kale, Adobe Fonts wuxuu ka mid noqonayaa Creative Cloud. Taasi waa, haddii aad xitaa leedahay hal qorshe oo codsi ah, waxaad isticmaali kartaa in ka badan 14.000 nooc oo xarfaha ah si aad ugu caddeyso inaad ku sharraxeyso nooc tayo iyo xirfadba leh.
Taasina waa xitaa hadaad haysato nooca bilaashka ah laga bilaabo 'Cloud Cloud', waxaad isticmaali kartaa ururinta aasaasiga ah ee noocyada laga helo Adobe Fonts. Taasi waa, waxaad leedahay xisaab aad ku isticmaasho Adobe XD, horeyba lacag la’aan ugu jirtay dhowr bilood, oo waad ku raaxeysan kartaa dhammaan noocyada aasaasiga ah ee laga helo Adobe Fonts.
Kaliya kama joogin xayeysiiskan la xiriira Adobe Fonts. Laakiin sidoo kale waxay ku dareen taxane ah astaamo cusub oo iswaafajin ah. Ilahaas daruurta tag. Taasi waa, haddii isticmaaluhu mid kiciyo, waxay ku isticmaali karaan meel kasta. Si kale haddii loo dhigo, dhammaan ilaha maktabadda waxaa laga heli karaa adeegsiga labada websaydh iyo desktop-ka.
Himiladu waa kobciso waayo-aragnimada Creative Cloud marin u helida xulasho balaaran oo noocyo tayo leh, nooca far-qorista oo kale oo aan jirin, iyo maxay tahay isdhexgalka bilaa cilmiga ah ee CC.
In kasta oo tirada ilaha si tartiib tartiib ah loogu dari doono. Marka hore waxay noqon doontaa ilaa 3.000 nooc oo cusub oo maktabadda ah taas oo ay u hogaansami doonaan waqtiga. Adobe oo sii kordheysa si uu u sii ahaado mid isku dhafan sida shirkad muhiim ah oo loogu talagalay naqshadeynta qalab kasta. Wax yar uun ka dib markaad ogaatay waxa cusub muhiim ah Adobe CC iyo barnaamijyo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Typekit hadda waa Adobe Fonts iyo qayb ka mid ah Creative Cloud